Midowga Afrika oo Sheegay in DFKM ah ay weerar ku qaadayso Mucaaradkeeda • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Midowga Afrika oo Sheegay in DFKM ah ay weerar ku qaadayso Mucaaradkeeda
Midowga Afrika oo Sheegay in DFKM ah ay weerar ku qaadayso Mucaaradkeeda
February 14, 2010 - By: Abdirahman. A
Ururka Midowga Afrika ayaa shaaca ka qaaday in Ciidanka DFKM ah ee Soomaaliya ay dhowaan duulaan qaadi doonaan.
Gudoomiyaha Ururka Midowga Afrika Jean Ping oo Saxaafadda kula hadlaayay magaaladda Addis Ababa ee xarunta u ah Ururka ayaa sheegay in DFKM ah ay wado ololihi ugu dambeeyey oo ay ku doonayso in ay weerar ku qaado Xoogaga Mucaaradka ee kasoo horjeeda.
Waxaana u sheegay in weerarkaas ay Ciidamada DFKM ah ay qaadi doonaan dhowaan isla markaana ay iminka wadaan diyaar garowgi ugu dambeeyey oo ay ku doonayaan in ay kula wareegaan dhamaan goobaha ay ka taliyaan Xoogaga Mucaaradka.
Mr.Ping ayaa sidoo kale sheegay in DFKM ah ay mar weliba baaq usoo jeedineyso Midowga Afrika ayna ka codsato in ay taageero siiso si ay ula dagaalanto Mucaaradkeeda oo iminka cadaadis ku haya.
Waa marki ugu horeysay Gudoonka Ururka Midowga Afrika uu shaaciyo in DFKM ah ay weerar ku qaadi doonto Xoogaga ka dagaalama gudaha Soomaaliya.
Warkan ayaa kusoo beegamaya xili uu shir hoose uga socdo magaalada Addis Ababa wafuud ka kala socota DFKMG iyo Ahlu Sunna Waljamaaca oo shir gaar ah halkaasi kuleh, macada in shirkaasi uu xiriir la leeyahay ololahan la sheegay inay dowladu qaadi doonto.
Wafdiga ka socda DFKMG ee uu hogaaminayo Shariif Xassan Wasiirka Maaliyadda, ayaa sagu horey uga codsaday dowlada Itoobiya inay gacan militari ka siiso dowlada FKMG si ay dib ulla wareegi lahayd gobalada galbeedka Soomaaliya ee Gedo,Â Bay iyo Bakool.
Dowlada FKMG oo baaqyo badan uga imaanayey Beesha Caalamka, ayaa si weyn loogu cadaadiyey inay tilaabo militari qaado, isla markaana hanato gacan ku heynta gobalada koonfureed ee dalka Soomaaliya, tilaabadaasi oo ay Dowladu weli qaadin, aan ka ahayn hanjabaadyo oo ay horey ugu sheegtay inay duulaan qaadi doonto.